गुगल र फेसबुकको लुकेका पाठहरू | Martech Zone
गुगल र फेसबुकको लुकेका पाठहरू
सोमबार, डिसेम्बर 16, 2013 सोमबार, डिसेम्बर 16, 2013 Douglas Karr
केहि बर्ष पहिले, म SEO मा बाहिर स्ट्रिंग थियो। म ठट्टा गर्दैछुईन ... गुगलले हाम्रो ब्लग पठाउँदै गरेको ट्राफिकले मलाई रातमा राख्थ्यो, लेखन, ट्वीक गर्दै, लेख्दै, ट्वीक गर्दै, लेखन गर्दै। म एल्गोरिथ्मको खोजी गर्दै थिए, मेरो प्रतिस्पर्धा, र यो ब्लगसँग मैले गरेको प्रत्येक निर्णयलाई ड्राइभ गर्दै थियो। म बढि बढि भेटहरू निचोर्न सक्षम थिएँ, र म विस्तृत सर्तहरूमा राम्रो र राम्रो क्रममा थिए। यो पागल थियो।
यो पागल थियो किनभने मैले मेरो बढ्दो श्रोताको ध्यान दिएन। दुई बर्ष पहिले, मैले मेरो आफ्नै ट्राफिकमा गहिरो खन्न सुरू गरें र केहि आश्चर्यजनक भेटियो। पहिलो, मेरो ट्राफिकको अधिकतर उच्च श्रेणीको कुञ्जी शब्दहरूबाट आएको थिएन, यो अत्यधिक प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूबाट आउँदै थियो जहाँ म जरूरी सबै मा राम्रो श्रेणी छैन। यसले मलाई सोच्न थाल्यो कि म जे गर्दैछु सबै पछिल्तिरको थियो ... म प्रासंगिकता र मेरो श्रोताको आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुको सट्टा रैंक र खोजी भोल्यूमा केन्द्रित थिए।
मैले राम्रो गुणस्तरको सामग्री प्रदान गर्न ध्यान केन्द्रित गरें, त्यस सामग्रीको फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै, र सुनिश्चित गरेर कि I त्यो ट्राफिकको स्वामित्व थियो। अवधि स्वामित्व मिडिया थोरै नैसिसिस्टीक लाग्दछ ... म ठिकसँग मेरो पाठकहरूको होइन। तर यसको मतलब यो होइन कि श्रोताहरू मसँग कुराकानी गर्न त्यहाँ छन्। तिनीहरू मसँग सुन्न अरू कतै जाँदै छैनन्, तिनीहरू मतिर आउँदैछन्। त्यस बिन्दुमा मैले हाम्रो ईमेल मार्केटिंग सूचीलाई जोड्न थालें ताकि हामी हाम्रो दर्शकहरूसँग सक्रिय रूपमा संवाद गर्न सक्दछौं।
गुगलले यसको एल्गोरिदम समायोजन गर्न जारी राख्यो। त्यहाँ खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरूमा अधिक भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरू छन् ... केहि स्थानीय SERPS वास्तवमा तिनीहरूमा सशुल्क परिणामहरूको पूरा पृष्ठ छ। जैविक यातायात ड्राइव गर्न पर्याप्त भाग्यशालीहरूको लागि, त्यहाँ प्रति पृष्ठ कम परिणामहरू छन् र ट्वीक गर्ने र लेख्न पर्याप्त राम्रो छैन। आधिकारिक स्रोतहरू द्वारा पदोन्नति र मान्यता तपाईंको प्रयासहरूको लागि महत्वपूर्ण छ। यसले एसईओ को लागि सामग्री मार्केटिंग अझ जटिल र अधिक महँगो बनाउँदैछ - तर यो अझै पनि ठोस लगानी हो।
जब हामी एक एसईओ रणनीति को साथ हाम्रो ग्राहकहरु धक्का, यद्यपि, हामी पनि रूपान्तरण रणनीति मा धक्का ... ईमेल मार्केटिंग सदस्यता संग डेमो र डाउनलोड को लागी रेजिष्ट्रेसन प्रमुख हुनु पर्छ। तपाईं आफ्नो छैन जैविक यातायात, गुगल गर्छ। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ वा प्राप्त गर्न पर्याप्त प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ उनीहरुको तपाईंको साइटमा ट्राफिक - तपाईंले तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ आफ्नो यातायात।
फेसबुक हालसालै घोषणा गर्‍यो कि तपाईंको व्यापार पृष्ठहरूमा ट्राफिक खस्किरहेको छ र उनीहरू तपाईंको व्यवसायलाई अधिक फेसबुक विज्ञापन खरीद गर्न चाहन्छन्। यो धेरै सरल अर्थशास्त्र हो ... तिनीहरूसँग तपाईंको श्रोताको स्वामित्व हुन्छ र तिनीहरू तपाईंलाई यो नि: शुल्क दिन चाहँदैनन्। तपाईंले तिर्नु पर्छ। मेरो राय मा, यो सामान्य अधिक बन्न गइरहेको छ। ठूला सामाजिक र सामग्री नेटवर्कहरू - विशेष गरी सार्वजनिक व्यक्तिहरू - धेरै यातायात मुद्रीकरण गर्न को लागी हो। यदि तपाईं पहुँच चाहानुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईंलाई शुल्क लगाउँदैछन्।
त्यसोभए के पाठ सिकियो?
तपाईंले सामग्री र रूपान्तरण रणनीतिमा लगानी गर्नुपर्दछ त्यो तपाईंको स्वामित्व मिडिया बढ्दछ, अन्यथा तपाईं भुक्तान जारी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ - र अधिक भुक्तान गर्नुहोस् - तेस्रो पार्टी साइटहरूको पहुँचको लागि।
तपाईंले ईमेल मार्केटिंग रणनीतिमा लगानी गर्नुपर्दछ यसले सान्दर्भिक ग्राहकहरूको आधार बढ्छ जुन तपाईं सन्देशहरू धक्का दिन र रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं अझै फाइदा छ। जबकि फेसबुक र गुगलले अरबौं प्रयोगकर्ताहरूको घमण्ड गर्न सक्छन्, ती प्रयोगकर्ताहरू ती गन्तव्यहरूमा गएका छैनन् उनीहरूको अर्को खरीद अनुसन्धान गर्न। तिनीहरू त्यहाँ जाँदैछन् फेला जहाँ अनुसन्धान छ। निश्चित गर्नुहोस् कि गन्तव्य साइट तपाईंको हो!
म तपाइँको सामाजिक प्रयासहरु लाई छोड्दै वकालत गरिरहेको छैन (जस्तो कि मैले कहिले पनि तपाइँको एसईओ प्रयासहरु लाई छोड्ने वकालत गरेको छैन)। मेरो मतलब यो हो कि तपाईले आफ्नो प्राथमिकताहरू प्राप्त गर्नु पर्छ। मैले सँधै भनेको छु कि सोशल मिडिया एक शानदार प्रमोशनल च्यानल हो जहाँ तपाईंको सन्देश प्रतिध्वनि हुन सक्छ। त्यो आज पनि सत्य हो ... तर तपाईंले गुगल र फेसबुक (र ट्विटर, गुगल +, लिंक्डइन, आदि) लाई आफ्नो रूपमा हेर्नु पर्छ। प्रतियोगिहरु, तपाइँका साथीहरू होईन। तपाइँको लक्ष्य तपाइँको श्रोताको भाग चोरी गर्नु हो जुन तपाइँ पछि हुनुहुन्छ र ती मानिसहरूलाई तपाइँको साइट, तपाइँको न्यूजलेटर, र तपाइँको रूपान्तरण मार्गमा ल्याउनुहोस्!
हाम्रो साइटको लागि अन्तिम परिणाम यो हो कि यसले थोरै समग्र प्रभाव पार्नेछ। हामी फेसबुक ट्राफिकमा निर्भर छैनौं - जसरी हामी अब गुगल खोजी ट्राफिकमा निर्भर छैनौं। मलाई थाहा छ यदि म राम्रोसँग लेख्छु भने, अधिक सान्दर्भिक लेख लेख्छु, र आगन्तुकहरूलाई हाम्रोमा रूपान्तरण गर्न जारी राख्छु स्वामित्व मिडिया दर्शकहरु, हामी बढ्न जारी राख्ने छौं।
टैग: दर्शकरूपान्तरणफेसबुकफेसबुक विज्ञापनहरूGoogle +स्वामित्व मिडियासशुल्क मिडियासामाजिक सञ्जाल
साइबर सोमबार मोबाइल जान्छ
२०१ The को शीर्ष सामाजिक मिडिया गल्तीहरू
डिसे 17, 2013 मा 6: 36 AM
मलाई यो लेख मनपर्‍यो! हामी जे विश्वास गर्न चाहन्छौं भन्ने छैन, मानिसहरू अनुसन्धानको लागि पहिलो स्टपको रूपमा Google मा जान्छन् र व्यक्तिले फेसबुकमा धेरै समय खर्च गर्दछन्। तपाईंले टाउकोमा नेललाई हिट गर्नुभयो, यद्यपि ... तिनीहरूको यातायातलाई तपाईंको ट्राफिक बनाउनुहोस्। भन्न सजिलो, गर्न कडा छ।
मलाई लाग्छ कि सोशल मिडिया उत्तम रूपमा तपाइँ र तपाइँको ब्लगहरू / मार्केटि campaigns अभियानहरूको बारेमा शब्द फैलाउन प्रयोग गर्दछ, तर एकचोटि तपाइँले "रोलिंग" पाउनुभयो, जस्तो कि, तपाइँ तपाइँको आफ्नै उत्तम मार्केटिंग टेकिन बन्नुहुन्छ। गुगलमा यी सबै परिवर्तनहरूले हामीलाई इन्टरनेट मार्किटरहरूलाई अझ राम्रो र स्मार्ट बजार बन्न बाध्य तुल्यायो जो कहिल्यै परिवर्तन हुने खोज इन्जिनहरूमा भरोसा गर्दैनन् र जसले एसईओमा घण्टासम्म घण्टा बिताउँछन्!
डिसे 17, 2013 मा 8: 07 AM
डग, तपाईंले आफूले प्रचार गर्ने कुराको अभ्यास गर्ने राम्रो काम गर्नुभयो। मलाई लाग्छ, तथापि, तपाईंको ब्लग टिपिंग पोइन्टमा पुग्यो जहाँ मौलिक शव्द रेफरेन्सको मूल शब्द (र लामो पुच्छर जैविक) ट्राफिकको प्राथमिक स्रोत हुन सक्छ। कसैको लागि केवल ब्लगको साथ सुरू गर्नका लागि तिनीहरू पर्याप्त मात्रामा "साझेदारी" मिडियामा निर्भर हुन जान्छन् (जसरी जय बेयरले भनेका छन्) स्रोतहरू।
स्पष्ट रूपमा, एक दीर्घकालीन स्वामित्व मिडिया दृष्टि उत्तम छ, त्यसैले सबै अन्तरिम प्रयासहरूको दिमागमा त्यो हुनु आवश्यक छ (अर्थात् हाम्रो आफ्नै श्रोताको विकास गर्नुहोस्)।
BTW, मैले जैसन र डेकर्स द्वारा "स्वामित्व मिडिया शिक्षा" को लागी एक प्लग राख्नु पर्छ। राम्रो सामान, र तपाईं के भनिरहनु भएको छ त्यसमा लेख्नुहोस्।
डिसेम्बर १, २०१ 17 2013:२:11 अपराह्न
मैले भर्खरै टुलबी र एरिकको पुस्तक सुरू गरें! हामीसँग यसको चाँडै नै एउटा पोष्ट हुनेछ।